ခွဲစိတ်ကုသပေးသူနှင့်စက်ရုံ - China Surgical Mask ထုတ်လုပ်သူများ
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ： အိမ်ခြံမြေ - ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပိုလီမာပစ္စည်းများနှင့်ထုတ်ကုန်များမူရင်း - Fujian, china စာရွက်စာတမ်းအမျိုးအစား - အမျိုးအစား ၁။ ရက်ကန်း၊ ပရက်စ်စာရွက်အရောင်: အပြာရောင်၊ အစိမ်း၊ အဖြူ / ပန်းရောင်အရွယ်အစား - ၁၇.၅ * ၉.၅ စင်တီမီတာ BFE - အထက် ၉၉% လက်မှတ် : CE ထုပ်ပိုး: 50pcs / box, 2000pcs / ctn မူလအစ: China MOQ: 10000 အပိုင်းပိုင်းပစ္စည်းအမည်: လည်စည်းမျက်နှာမျက်နှာဖုံးအထူးသဖြင့်: ငါတို့၏အားသာချက်: 1. Welcom OEM & ODM ။ 2. စက်ရုံစျေးနှုန်းအလယ်အလတ်ကွာခြားချက်မရှိပါ။ ၃။ အရည်အသွေးကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ၄ ။
စမ်းသပ်မှုတွေကဘာတွေလဲ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပေးသည့်အ ၀ တ်အထည်သည်အလွန်မြင့်မားသောဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကာကွယ်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းသည်အလွန်တင်းကြပ်ပြီးပစ္စည်းများစွာကိုစမ်းသပ်ရန်လိုအပ်သည်။ စံတစ်ခုတည်းနှင့်သာတွေ့ဆုံခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးစုံကိုစမ်းသပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အသုံးပြုမှုပတ် ၀ န်းကျင်၏အထူးသဖြင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်အ ၀ တ်အထည်များအတွက်အသုံးများသောစမ်းသပ်ပစ္စည်းများမှာမှုန်ရေမွှားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပိုးသတ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်၊ ပိုးသန့်ဆေးလိုအပ်ချက်များ၊ ပြင်းထန်သောချိုးဖေါက်ခြင်း၊ ချိုးချိန်တွင် elongation၊
အသုံးပြုခြင်း ၁။ လျှောက်လွှာ။ ဆောက်လုပ်ရေး၊ သတ္တုတူးဖော်ခြင်း၊ အထည်အလိပ်၊ ကြိတ်ခွဲခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ စက်ရုံအလုပ်ရုံ၊ SPAs၊ ဆေးရုံများ၊ ဆေးခန်းများ၊ ကျောင်း၊ အလုပ်နေရာများစသဖြင့် ၃။ သဘာ ၀ ဓာတ်ငွေ့များနှင့်အနံ့များကိုကာကွယ်ခြင်း။ ထူးခြားချက်များ - ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်သဘောင်္ - ငွေပေးချေမှုကာလ - ငွေပေးချေခြင်းကာလ - သင် T / T မှတစ်ဆင့်ငွေပေးချေနိုင်သည်။ , Ali Trade Assurance, Western Union ကုန်သွယ်မှုကာလ - ၁ - ၁ ရက်မှ ၃ ရက်အတွင်းနမူနာ ၂ - အမြောက်အများမှာယူချိန် ၅-၁၅ ရက်၊ အရေအတွက်ပေါ်မူတည်သည်။
3 Ply ခွဲစိတ်ကုသမျက်နှာဖုံး
မျက်နှာဖုံးအထူးကုခွဲစိတ်ကုသနိုင်သော3Ply
ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်: 1. Welcom OEM & ODM ။ 2. စက်ရုံစျေးနှုန်းအလယ်အလတ်ကွာခြားချက်မရှိပါ။ ၃။ အရည်အသွေးကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံ၊ စတိုင်၊ ပုံစံ၊ ဒီဇိုင်းစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ ၆ ။ ၇ ။ ၈။ "Quick Response" နှင့်ရောင်းချပြီးနောက်ကောင်းသော ၀ န်ဆောင်မှု။ မျက်နှာဖုံးဆိုင်ရာအသွင်အပြင်များ: မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ: Q1: သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအရာကိုမတွေ့ပါကကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်သင့်သနည်း။ A1: အီးမေးလ် ...
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ： အိမ်ခြံမြေ - ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပိုလီမာပစ္စည်းများနှင့်ထုတ်ကုန်များမူရင်း - Fujian, china စာရွက်စာတမ်းအမျိုးအစား - အမျိုးအစား ၁။ ရက်ကန်း၊ ပရက်စ်စာရွက်အရောင်: အပြာရောင်၊ အစိမ်း၊ အဖြူ / ပန်းရောင်အရွယ်အစား - ၁၇.၅ * ၉.၅ စင်တီမီတာ BFE - အထက် ၉၉% လက်မှတ် : CE ထုပ်ပိုး: 50pcs / box ကို, 2000pcs / ctn မူလအစ: China MOQ: 10000 ကိုအပိုင်းပိုင်းပစ္စည်းအမည်: လည်စည်း - မျက်နှာမျက်နှာဖုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အားသာချက်: 1. Welcom OEM & ODM ။ 2. စက်ရုံစျေးနှုန်းအလယ်အလတ်ကွာခြားချက်မရှိပါ။ ၃ ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ： အိမ်ခြံမြေ - ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပိုလီမာပစ္စည်းများနှင့်ထုတ်ကုန်များမူရင်း - Fujian, china စာရွက်စာတမ်းအမျိုးအစား - အမျိုးအစား ၁။ ရက်ကန်း၊ ပရက်စ်စာရွက်အရောင်: အပြာရောင်၊ အစိမ်း၊ အဖြူ / ပန်းရောင်အရွယ်အစား - ၁၇.၅ * ၉.၅ စင်တီမီတာ BFE - အထက် ၉၉% လက်မှတ် : CE ထုပ်ပိုးမှု - ၅၀pcs / box၊ 2000pcs / ctn မူရင်း - China MOQ: ၁၀၀၀၀ အပိုင်းအစပစ္စည်းအမည် - မျက်နှာချင်းဆိုင်မျက်နှာဖုံးမျက်နှာဖုံးခဲအချိန် - အရေအတွက် (ကာတွန်း) ၁ - ၁၀ ၁၁ - ၁၀၀ ၁၀၁ - ၁၀၀၀> ၁၀၀၀ ...
အရည်အတားအဆီးဆိုသည်မှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပေးသည့်အဝတ်အစားသည်လူနာ၏သွေး၊ ခန္ဓာကိုယ်အရည်များနှင့်အခြားရောဂါများမှကူးစက်သောဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်ရေ၊ သွေး၊ အရက်နှင့်အခြားအရည်များ၊ hydrophobicity အဆင့် ၄ ခုထက်ပိုသောရေ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်း။ ပိုးမွှားအတားအဆီးသည်အဓိကအားဖြင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းများနှင့်လူနာများအကြားအဆက်အသွယ်ပြန့်ပွားမှုနှင့်ကူးစက်ရောဂါကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ဘက်တီးရီးယားနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များကာကွယ်သည့်အ ၀ တ်အထည်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ လုပ်ဆောင်မှုကိုစီစစ်ခြင်း ...
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ： အိမ်ခြံမြေ - ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပိုလီမာပစ္စည်းများနှင့်ထုတ်ကုန်များမူရင်း - Fujian, china စာရွက်စာတမ်းအမျိုးအစား - အမျိုးအစား ၁။ ရက်ကန်း၊ ပရက်စ်စာရွက်အရောင်: အပြာရောင်၊ အစိမ်း၊ အဖြူ / ပန်းရောင်အရွယ်အစား - ၁၇.၅ * ၉.၅ စင်တီမီတာ BFE - အထက် ၉၉% လက်မှတ် : CE ထုပ်ပိုးမှု - ၅၀pcs / box၊ ၂၀၀၀pcs / ctn မူလ - China MOQ: ၁၀၀၀၀ အပိုင်းအစပစ္စည်းအမည် - မျက်နှာမျက်နှာဖုံးမျက်နှာဖုံး
ခဲအချိန်: အရေအတွက် (ပုံး) 1 - 10 11 - 100 101 - 1000> 1000 Est ။ အချိန် (နေ့များ)720 30 ညှိနှိုင်းရမည့်အင်္ဂါရပ်များ: လျှောက်လွှာ - ၁။ လျှောက်လွှာ - ဆောက်လုပ်ရေး၊ သတ္တုတွင်း၊ အထည်အလိပ်၊ ကြိတ်ခွဲသည့်ဆေး။ ဆေးရုံများ၊ ဆေးခန်းများ၊ ကျောင်းများ၊ လုပ်ငန်းခွင်များစသည်တို့။ ၃။ သဲလွန်စအော်ဂဲနစ်ဓာတ်ငွေ့များနှင့်အနံ့များကိုကာကွယ်ခြင်း ၄။ ကြိတ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်း၊ sawing နှင့်bစသည်တို့တွင်ထုတ်လုပ်သောအမှုန်များကိုကာကွယ်သည်။ ။